अनुसन्धान प्रस्ताव - विकिपिडिया
एक रिसर्च रिपोर्ट
अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि तैयार गरिएको पत्र लाई अनुसन्धान प्रस्ताव भनिन्छ । यसमा बिभिन्न बुंदा मा अनुसन्धान को परिचय, प्रस्ताब को बयान,अध्ययन को स्थान तरिका बिधि आदिको बिस्तृत जानकारी हुन्छ। सामान्यतया अध्ययन को क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ । प्रस्तावहरू मा सामान्यता प्रस्तावित अनुसन्धानको सम्भावित प्रभावको मूल्याङकन गरिन्छ। अनुसन्धान मा मुख्य निम्न बुँदाहरू को सम्बोधन गरिन्छ 
कस्ता अनुसन्धान प्रश्न (हरू) लाई सम्बोधन गरिनेछ, र उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ ।
अनुसन्धानको लागि कति समय र लागत आवश्यक हुन्छ ?
के विषयमा अनुसन्धान गरिएको छ ?
कसरी अनुसन्धानको नतीजा मूल्यांकन गरिनेछ ?
अनुसन्धान ले प्रायोजक, संगठन वा अन्य पक्षहरु लाई कुन रुप मा सहयोग हुन्छ ?
शैक्षिक अनुसन्धान[सम्पादन गर्ने]
अनुसन्धान प्रस्तावहरू निम्न बिषय मा, निम्न तरिका ले, निम्न समय स्थान मा गरिने छ भनि सम्पुर्ण रुपमा तैयार गरिएको दस्तावेज हो । जुन अनुसन्धान गर्नु पुर्व तैयार गरिन्छ। पूरा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि पूर्वावलोकनको लागि आशय पत्र वा संक्षिप्त सार प्रस्तुत गरिन्छ। 
शैक्षिक अनुसन्धान प्रस्तावहरू सामान्यतया थेसिस, शोध पत्र लेखनको प्रारम्भिक आवश्यकताहरूको अंशको रूपमा लेखिन्छन्।  तिनीहरू सामान्यतया अनुसन्धान पत्र ला लागी एउटा निश्चित ढाँचा अनुसरण गर्छन। त्यसमा परिचय, साहित्य समीक्षा, अनुसन्धान पद्धति र लक्ष्यहरूको छलफल, र निष्कर्ष हरु हुन्छन।
↑ Yousaf, Saeed T. P., "Keypoints ofaResearch Proposal", Scholarshipfellow.com.com, अन्तिम पहुँच ७ जनवरी २०१८।
↑ "WritingaResearch Proposal", University of Illinois at Urbana-Champaign, अन्तिम पहुँच २१ जुन २०१६।
↑ "How to Write Academic Research Proposal", A Jonson Hillviews Magazine Editor, अन्तिम पहुँच २० डिसेम्बर २०१८।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अनुसन्धान_प्रस्ताव&oldid=1016473" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:१८, १२ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।